जनकपुरमा अर्को निर्मला पन्त जस्तै घ’टना – Sanchar Patrika
जनकपुर , १९ असार । धनुषामा दुई दिनदेखि बेप,त्ता एक १० वर्षीया बालिका मृ,तावस्थामा फेला परेकी छिन् । जनकपुर उपमहानगरपालिका २१ स्थित कुर्थामा रहेको दूधमती नदीको किनारामा १० वर्षीया बालिका कन्चनकुमारी पजियारको शुक्रबार बिहान खेत छेउकै दूधमती नदीमा मृ,तावस्थामा फेला परेकी हुन् । स्थानीयले बालिकाको बला,त्कारपछि ह,त्या भएको हुन सक्ने आ’शंका गरेका छन् ।
Prevभुवन केसीलाई अर्को क’डा झ’ड्का, साम्राज्ञीको बचाऊ गर्दै बोलीन् उनकी आमा !
Nextआज शनिबार, थाहा पाउनुहोस शनिबार जन्मेका मानिसको भाग्य र स्वभाव कस्तो हुन्छ ? जान्नुहोस्